Ryanair ले मार्च २०१ 2018 सम्म यसको रद्द उडान विस्तार गर्दछ यात्रा समाचार
कारमेन गुइलन | | सामान्य, हाम्रो बारेमा
केही दिन अघि हामीले दुःखको साथ कुराकानी गर्‍यौं कि Ryanair एयरलाइन अक्टोबर २ 28 सम्ममा निर्धारित ठूलो संख्यामा उडानहरू रद्द गरिसकेका थिए। खैर, आज हामी जान्दछौं Ryanair ले यसको रद्द उडानहरू भन्दा कम विस्तार गर्दछ मार्च २०१ until सम्म। यसको मतलब के हो? अरू के हुन्छन् ,400.000००,००० यात्रीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भए नोभेम्बर पछि, सेप्टेम्बर र अक्टुबर को लागि रद्द को ठूलो संख्या मा पहिले नै जोड्न।
त्यसैले तिनीहरूले यसलाई विस्तृत प्रेस विज्ञप्तिबाट थाहा पाए जुन तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ उनिहरूले रद्द गरेका कारण र हवाईपोर्टहरू जुन यी रद्दताहरूद्वारा सर्वाधिक प्रभावित हुने कारणको सारांश प्रस्तुत गर्दछन्।
आज, Ryanair को कुल 400 विमानहरु को छ, जस मध्ये २ working काम गर्न रोक्दछ सूचित मिति सम्म। यो मानिन्छ कि आउँदो जाडो को समयमा, कुल routes 34 मार्गहरू रद्द गर्दछ, तिनीहरू मध्ये दुई स्पेनिश एयरपोर्टको साथ शामिल। यसले अब यात्रुहरूलाई मात्र असर गर्दैन जसले यी उडान टिकटहरू किनेका थिए तर आयरिश कम लागतको कम्पनी पनि, किनभने यसले आफ्नो बृद्धि पूर्वानुमानलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको छ।
२०१ 2018 को गर्मी को लागि, Ryanair को कूल मा 445 10 विमान को एक बेड़ा को योजना बनाएको छ र उनीहरु पहिले नै चेतावनी दिन्छ कि ती मध्ये, ती १० आज बिरोध हुनेछ कि उही मुद्दा को कारण उनिहरुलाई आज पायलटहरु को छुट्टी संग गडबड।
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजमा हामी जान्छौं: कुन स्प्यानिश उडान वा रुटहरू अहिलेसम्म यी रद्दतामा फसेका छन्? एयरलाइन नै अनुसार, तिनीहरू हुन् ग्लासगो-लास पाल्मास र सोफिया-कास्टेलन। रायनायरले यो पनि सुनिश्चित गर्यो कि यात्रुहरूलाई उनीहरूको टिकटको वैकल्पिक उडान वा फिर्ताको फिर्ता प्रस्ताव ईमेलले पहिले नै सूचित गरिसक्यो। र ती सबैलाई e० यूरोको कूपन (round० राउन्डट्रिप उडानको मामलामा) द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ ताकि तिनीहरू अक्टुबर र मार्च बिच कम्पनीमा उडान गर्न सक्दछन्। यस अन्तिम विकल्पको लागि अप्टिंग गर्ने यात्रीहरूले अक्टुबरमा टिकट बुक गर्नु पर्छ।
1 रद्द उडान मार्गहरू
2 Ryanair द्वारा जवाफ प्रश्नहरू
रद्द उडान मार्गहरू
दुबै स्पेनिश पाठकहरूका लागि जसले हामीलाई पछ्याउँदछन् र उनीहरूले हामीलाई जो हाम्रो सिमाना बाहिरबाट पछ्याउँदछन्, यहाँ नोभेम्बरदेखि मार्च २०१ canceled सम्म रद्द गरिएका सबै मार्गहरू छन्:
बुखारेस्ट - पलेर्मो
सोफिया - कास्टेलन
चानिया - एथेन्स
सोफिया - मेमेन्जेन
चानिया - पेफोस
सोफिया - पिसा
चानिया - थेसलोनिकी
सोफिया - स्टॉकहोम (NYO)
कोलोन - बर्लिन (SXF)
सोफिया - भेनिस (TSF)
एडिनबर्ग - Szczecin
थेस्सलोनिकी - ब्राटिस्लावा
ग्लासगो - लस पाल्मास
Thessaloniki - पेरिस BVA
ह्याम्बर्ग - एडिनबर्ग
थेस्सलोनिकी - वारसा (WMI)
ह्याम्बर्ग - क्याटोविस
ट्रपानी - बडेन बडेन
ह्याम्बर्ग - ओस्लो (TRF)
ट्रापाणी - फ्रैंकफर्ट (HHN)
ह्याम्बर्ग - थिस्सलोनिकी
ट्रापानी - जेनोआ
ह्याम्बर्ग - भेनिस (TSF)
ट्रपानी - क्राको
लन्डन (LGW) - बेलफास्ट
त्रापानी - पर्मा
लन्डन (STN) - एडिनबर्ग
ट्रपानी - रोम एफआईयू
लन्डन (STN) - ग्लासगो
ट्रपानी - ट्रिस्ट
न्यूकासल - फारो
व्रोकला - वारसा
न्यूकासल - ग्डान्स्क
ग्डान्स्क - वारसा
Ryanair द्वारा जवाफ प्रश्नहरू
अर्को, हामी तपाईंलाई केही धेरै बारम्बारका प्रश्नहरूसहित छोड्छौं जुन हालसालैका रद्दहरूमा र्यानयरसँग सोधिएको छ:
के यो A / L पign्क्तिबद्ध समस्या २०१ itself मा फेरि दोहोरिनेछ?
होइन किनकि A / L लाई २०१ 12 मा पूर्ण १२-महिना अवधिको लागि तोकिनेछ।
के सबै प्रभावित ग्राहकहरुलाई जाडो समयमा परिवर्तनको बारेमा सूचित गरिएको छ?
हो, सबै प्रभावित ग्राहकहरूले आज ईमेल सूचनाहरू प्राप्त गरेका छन्।
के यो समय परिवर्तन ग्राहकहरु EU261 क्षतिपूर्ति को हकदार छन्?
होईन, किनकि यी तालिकाहरू परिवर्तनहरू weeks हप्तादेखि months महिना अघि गरिएको छ, EU5 क्षतिपूर्ति उठ्दैन।
के यो ढिलो वृद्धिको परिणामको रूपमा दरहरू वृद्धि हुनेछ?
Ryanair दरहरु घटाउन जारी हुनेछ। आगामी हप्तामा १ मिलियन सीट बिक्रीको साथ seat way 1 € एक तरीकाले दरको साथ सिट बिक्रीको श्रृंखला आउँनेछ।
के त्यहाँ अधिक रद्दताहरू छन्?
यो ढिलो वृद्धिको अर्थ यो छ कि हामीसँग स्पेयर एयरक्राफ्ट र पाइलटहरू जाडोमा र २०१ 2018 को गर्मीमा बाँकी छ। गत हप्तामा हामीले १ 16.000,००० भन्दा बढी उडानहरू मात्र only रद्दसहित चलायौं, १ रनवे बन्द हुने कारणले २ र प्रतिकूलको कारण २ विचलन।
म कसरी थाहा पाउन सक्दछु यदि मेरो उडान प्रभावित भएको छ?
तपाईले एक उडान परिवर्तन ईमेल प्राप्त गर्नुभयो Ryanair बाट कि त सोमबार, सेप्टेम्बर १ 18 वा आज, बुधवार, सेप्टेम्बर २। मा हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » Ryanair ले मार्च २०१ 2018 सम्म यसको रद्द उडानहरू विस्तार गर्दछ
एकल कैरी-ब्यागको साथ कसरी सम्पूर्ण हप्ता यात्रा गर्ने